Qore: Axmad Cabbas (Gacma-Gaab)
31ka Agoosto 2013
Jiritaanka Dawladda Puntland wuxuu kowsaday 1di July 1998, taasoo ku beegan maalinti la ansixiyay Axdigi Ku-Meel-Gaarka ahaa. Sidaas awgeed, maantay oo ah 31ka bisha Agoosto ee sannadka 2013 Puntland waxay jirstay 15 sano iyo laba bilood. Puntland waxay ballaysintay guul la mahadiyay. Hor iyo horraan waxay soo afjartay haggaaminti jabhadahi ka talinayay geyiga Puntland (SSDF, USP iyo SDU). Hannaanka maamul ee mandaqadda Puntlad wuxuu u xuubsiibtay maamul rayid ah. Mudda yar gudaheed, waxaa dhidibbada loo aasay haykal maamul oo waafaqsan Axdigi ku meel gaarka ahaa kaasso lagu suuradin karo qaab-dawladeedka casriga ah ee dunida ka hanaqaaday. Ayada oo la raacayo Axdigi Ku-Maael-Gaarka, waxaa suurta gashay in mudda yar gudaheed la ababulo hay’adihi sharci dejinta, Fulinta iyo Garsoorka. Meelaynta saddexdaas gole waxay suurta gelisay in si sahlan oo xasarad ka maran loo abaabulo hay’ado amni (Boolis, Daraawish iyo Asluub) iyo shaqaale rayad ah.
Qaran ahaan, puntland waxay hanatay meekhaan ay si wax ku ool ah uga qayb-qaadan karto dib-u-yagleelidda dawlanimo qaran. Axdigi ku-meel-gaarka aha wuxuu soo bandhigay hindise lagaga fursan karo kala googo’o isla markaana lagaga raysan karo nidammki ay awoodda dawladnimo oo dhammi ku urursnayd dawladda dhexe.
Dhanka Caalamka, curashadi puntland waxay abuurtay hannaan hay’adaysan oo suurta gelinaya in beesha caalamka iyo puntland ay iska-kaashadaan horumarinta adeegyada bulshada, aminga mandaqadda iyo addunweynaha.
Qiimayn isu-dheellitiran oo lagu sameeyo waayihi puntland waxay ka marag-kacaysaa in uu jiro horumar la gaaray. Dhinac kale waxaa jira guulo la gaari karey oo laga gaabiyay, iyo dhinacyo uu la soo gudboonaaday dhibudhac, marka laga tilmaan qaato xaaladdi jirtay asaaski Puntland.
Haykalki maamul ee Puntland wuxuu noqday mid tabbagal ah, rabitaanka dadweynaha ka sokowna, asaga ayaa sugay jirtaanka iyo kor-u-qaadidda adeegyada bulshada puntland. Dhinac kale marka laga eego, waxaa jira saluug la xariira heerka tayada maamulka taasoo loo aananayn karo in la gabay horumar aad uga sarreeya heerka hadda la marayo.
Dimuqaraaddiyaynta Puntland waxay ka mid ahayd himilooyinki ugu mudnaa ee uu gaaray shirweynihi lagu asaasay Puntland ee ka dhacay Caasimadda dawlad Goboleedka Puntland, Garoowe, muddadii u dhexaysay 15ki May iyo 1di Agoosto 1998. Haddii laga dhabayn lahaa Go’aanki shirweynaha iyo qodobbadi Axdiga ee ku aaddanaa dimuqaraaddiyayanta hannaanka siyaasadda, 30ki Juun 22 sannadki 2001 ayay puntland ka hirgellahayd doorsho toos ah oo xor ah. Sidaas awgeed, hirgelinta dimuqaraaddiyayanta Puntland wuxuu dib-dhacsanyahay 12 sano iyo 2 bilood.
Fikradda Federaalnimadu waa mid maamulka puntland ku adagyahay, soomaaliya iyo addunkana saamayn xoog leh ku yeelatay. Halki ay ku koobnayd mid ka mid ah qodobbada Axdiga Ku-Mel-Gaarka ah, Federlanimadu waxay gaartay heer ay ka mid noqoto mabaadi’ida asaagi ah ee Dastuurka Qaranka. Dhinac kale marka laga eego, waxaa jira saluug la xariira in Puntland dadaalki loo baahnaa aanay u hurin sida federaalnimadu u tahay hannaanka ugu habboon ee lagu higsan karo hanashada dawladnimo dadweynaha Soomaaliyeed wada leeyahay, danahoodana u jirta. Duruufihi gaarka ahaa ee ka jiray puntland waxay u suurta gelinayeen in ay dadaal aqooneed geliso habboonaanta Federaalnimada. Waxaa kaloo Puntland la gudboonaa in ay noqota xarunta dood-cilmiyeedyo ay ku soo hirtaan aqoonleyda Soomaaliyeed iyo kuwa caalamka ee ku xeel-dheer arrimaha Soomaaliya. Waxa ay u muuqataa in aragtida Federalnimada Puntland aanay dhaafin heer hal-ku-dheg, taas oo ayadyna mudnaanteeda leh. Xaaladda noocaas ahi waxay fursad siisay abaabul federal diid ah oo ku duraya puntland in ay sed-bursi doon tahay.
Dhinacayda kale ee dib-dhacu ka jiro waxaa ka mid ah in dareenki Puntlandnimada uu hoos uga dhacay heerki uu taagnaa marki la asaasay puntland. Qaar ka mid ah qaybihi ugu minitdsanaa curinta Puntland ayaa ku hawllan abaabul ka baxsan haykalka Puntland. Guud ahaan, waxaa jira gocasho marba marka dambaysa isa soo taraysa taassoo la xariirta in Puntland la wada samaystay hase ahaatee uu si wiiqmayo dareenki wada-lahaanshaha ee ay la kowsatay.
Dib-u-dhaca ugu weyni wuxuu ka jiraa ka bayridda dhaqanki wada-tashiga ee saldhigga u ahaa abaabulidda iyo ku guulaysiga Puntland, isla markaasna ay hiddo soo jireen ah u lahaayeen, welina u leeyihiin, dadweynaha ku midoobay Puntland. Puntland waxay ka dhalatay wada-tashi, liibaanteeduna waxay saaratahay wada-tashiga.
si kasta oo loogu kala geddisnaan karo qiimaynta horumarka ay Puntland hanatay iyo dib-u-dhaca la soo gudboonaaday, waxay u badantahay in aan lagu kala bayri Karin in ay guul taariikhi ah tahay in uu hadda socdo tabaabusho loggu jiro xilsaaariddi meertadi maamulki afraad ee Puntland. Xilsaaridda Golaha sharcidejinta afraad waxay ku beegantahay 31ka Oktoobar ee sannadkan 2013. Jadwalka meertaynta maamulku wuxuu kaloo farayaa in Golaha Xeerdejinta afraad uu doorto Madaxweynihi iyo madaxweynie Ku xigeenki shanaad ee Puntland yeelato.
Abbaraha u baahan falgelid ay xikamdi hoggaminayso waxaa ka mid noqon kara higsashada ka miradhalinta laba himilo oo mataana ah, kuwasso ay adagtahay in midkoodna keli ahaanti guul lagu gaaro. Himilada koowaad, oo ah midda asaasiga ah, waa aqoolidda halbeegyada majaraha hoggaanka afraad ku hagi doono Puntland, muddada xil-hayntiisa. Himilada labaad, waa in la xilsaaro hoggaan daacad u ah ka miradhalinta majarahaas isla markaasna oofin kara shuruudihi hoggamineed ee la faca ah marxaladda ay tahay in puntland u diga-rogoto.
Affarta bilood ee innaku soo fool, dadweynaha puntland waxaa la gudboon in ay ku tallabsadaan tabaabushe laba-seeble ah oo isku jaha ah. Tan koowaad, waxaa lagama maarmaan ah in la dar-dar geliyo dhaqanki iyo hiddihi Wada-Tashiga ee ay puntland ka unkantay. Faa’iidooyinka Wada-Tashiga waxaa ka mid in la iska bogsiiyo wixii tabasho ah oo jira si loo cusboonaysiyo dareenki midnimo ee puntland la curatay. Fa’iidada labaad ee wada tashigu leeyahay waxaa ka mid isla-meldhigidda majraha tis-qaadka cusub ee Puntland.
Dadaalka labaad ee ma dhaafaanka ah waxaa weeye in hoggaamiye dhaqameedka Puntland, guurti iyo Isimmomba, aanay surmateegtayn xilka saaran. Xilliyadi meertaynta maamulka ee la soo maray, halhaysyada soo noq-noqda waxaa ka mid ahaa noqoshada xil-dhibannadu “Xul ma ahee waa Xal”. Hoggaanka dhaqanka ee Puntland sina ugama baaxsan karo, guud ahaan iyo gaar-gaar ahanba, in ay go’aan kasta oo gaarayaanna ku saleeyan xilsaaridda xildhibaanno Xul Ah. Xildhibaanno Xul ah ayaa laga filan karaa in ay labada xil e ugu sarreeya puntland u doortaan muwaddiniin u qalanta. Hoggaanka dhaqanku waxay u maara la’ayihiin baylah ma dhammaato ah oo ay ku banneeyeen xildhibanno ay aygu gacantooda ku saxiixeen iyo maamulki fulinta ee isla xildhgibaannadaasi dhiseen. Hoggaanka dhaqanku, u hiilinta danta guud ka sokow, waa in ay markan u hiiliyaan martabaddooda bulsho.
Ugu Dambaynti: Madaxweynaha Puntland, Mudane Cabdiraxmaan Maxmad Maxamuud waxaa la gudboon inuu fududeeyo wada-tashiga dadweynaha puntland.
Talo Waa tii Rabbi
Faafin: SomaliTalk.com | Aug 31, 2013